थालीमा तरकारी कि मासु ? पाप र धर्मको बहस - Jagaran Post
जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ११:४०
डा. अरुणा उप्रेती//
संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य कृषि संगठनले’ तरकारी र फलफूलको महत्व बढाउन र भोजनमा बढी समावेश होस भनेर जागृती फैलाउन सन् २०२१ लाई “फलफूल र तरकारीको वर्ष” भनेर उद्घोष गरेको छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा तरकारी र फलफूलको महत्वलाई बढाएर, यस्ता वस्तुको प्रयोग दैनिक जीवनमा गरिनेछ भन्ने आशा छ ।
५४ वर्ष अघि म इरानको “वाम” भन्ने शहरमा जनस्वास्थ्य विज्ञ भएर काम गर्दै थिएँ, भूकम्प गएको क्षेत्रमा । एकदिन ‘वाम’ शहरबाट केही टाढा एक सानो शहरमा खाना खान गर्यौं । सानो चमेना गृहमा मैले त्यहाँका मालिकलाई भने “म शाकाहारी हुँ मासु नहोलेको परिकार दिनु है ।” ‘हुन्छ’ भनेर ती ब्यक्तिले नान, रोटी र सुप ल्याए । म दंगपरे । मुखमा सुप हाल्ने बित्तीकै मलाई थाहा भयो कि ‘यसमा त मासु छ’ “मैले त मासु खान्न भनेको, किन मासु हालेको ?” भनेर सोध्दा चमेना गृहका ब्यक्तिले भने “होइन, यो त मासुको रस मात्रै हो, मासु त मैले झिकिसकेँ नि । यहाँ मासु नखाने मानिसहरू आउँछन् त्यसैगरी हामी सुप पकाउँछौं ।” उनको कुरा सुनेर मलाई हाँसो उठ्यो ।
मैले कालो चियासँग नान र केही फलफूल खाएँ । इरानमा ३ महिना बसुन्जेल मैले होटेलमा जाँदा तरकारी, दाल कहिले खाइन । फलफूल, दही र भात मात्र खाए । इरानमा बस्दा मलाई अनुभव भयो कि “मासुको टुक्रा नखाने मानिसहरू” त्यहाँ शाकाहारी हुँदा रहेछन् । अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा बस्दा त मान्छेहरूले “मासु नखाए पनि मान्छे बाँच्न सक्छ र ?” भन्ने प्रश्न गर्थें । ठाउँ र समय अनुसार मासु खाने कि नखाने भन्ने बहस हुन्छ ।
खाना/भोजन मान्छेको संस्कृती, भौगोलिक अबस्थासँग गाँसिएको हुन्छ । ‘जहाँ जे पाइन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो, त्यसैबाट स्वास्थ बन्ने हो । अरूलाई होच्याउनुको तुक छैन’ भन्ने मेरो विचार छ । तर अहिले मलाई ‘मासु’ खाने कि ‘नखाने’ भन्ने प्रश्न गर्दा ‘मन लागे खाने’ भन्न मन लाग्छ । मासु खाए पापीहरू भन्ने, मनमा चसक्क बिझ्ने गरी “नर्क जान्छौं” भन्ने तर्क सुन्दा हास्यपद लाग्छ । तिब्बतको अनकंटार कुनामा जहाँ मासु मुख्य भोजन हो, त्यहाँ गएर ‘तरकारी खाउ, मासु नखाउ’ भन्न सकिन्छ होला ?
कृषि युग शुरु हुनु भन्दा अघि हाम्रा पूर्खाहरू मासु नै खान्थें, उनीहरू ‘पापाी’ भनेर भन्न त सकिन्न होला । कुनै धर्मले मासु नखाउ भन्छ, फेरी कतिजानाको त धार्मिक संस्कारमा पनि मासु र अण्डा नभइ हुँदैन । कति जनाको श्राद्धमा ‘मासु’ उच्चाण नै गरिन्न। क्ति जनाको श्राद्ध संस्कारमा झन बंगुर, खसीको मासु हुनैपर्छ ।
अमेरिकाको ‘अलस्का’ मा बस्नेहरू, पश्चिम बंगाल र बंगला देशका मानिसलाई “माछा नखाउ पाप लाग्छ” भन्दा कति हास्यपद सुनिएला ? “माछी झोल” नभइकन कुनै बंगालीले आफ्नो भान्छाको कल्पना गर्न सक्छ र ? कतिपय ठाउँमा त चिप्लेकिरा, फट्याङग्रा, सर्पो, आदि खान्छन् हजारौ वर्षदेखि । ती समुदायका मानिसहरू मरेपछि नर्कमा परेर, दुःख परेर, पृथ्वीमा कसैलाई आफ्नो अनुभव सुनाएको छ र ? हो, मासु खाँदा अनेक चिल्लो हालेर मज्जासँग आधा किलो चामलको भात दशवटा रोटी खानेहरूको यदि तौल बढेर समस्या भयो भने, मुटुको समस्या भयो भने त आफै मासु कम गर्छन् ।
‘पाप’ र धर्म को बहस गर्नै पर्दैन ।